Kuchinja mota kubva peturu kuenda kuLPG: zvinodiwa uye mutengo | Green Renewables
Chinja mota kubva peturu kuenda kuLPG
ChiGerman Portillo | | Autogas
LPG kana inozivikanwawo sequefefied petroleum gasi ipeturu yakanangana negasi rechisimba iro rine hunyanzvi hwakakura nemutengo wakaderera asi izvo zvinoda mutengo wekutanga. Kune vanhu vazhinji vanoda chinja mota kubva peturu kuenda kuLPG asi havanyatso kuziva mirau kana mutengo wayo.
Neichi chikonzero, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza izvo zvaunofanira kuziva kuti ukwanise kushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG.
1 Shanduko yemafuta
2 Zvimiro zvekushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG
3 Mutengo wekushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG
Liquefied petroleum gasi ine yakaderera mutengo uye magasi nzvimbo, kunyangwe pasina mapampu kwese kwese. Izvo zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kuitira kuti mota ishandure kubva peturu kuenda kuLPG, mamwe matanho anofanirwa kusangana. Shanduko haigoneke pamotokari dzese uye Kana iwe uchida kutora iyo ECO chitaridzi kubva kuDGT, mota yako inofanirwa kusangana nemimwe mamiriro. Vazhinji vagadziri vanotova mune yavo yakawanda vhezheni ine mamodheru ane Autogas ayo ari fekitori-akagadzirira kugamuchira LPG uye peturu. Uye zvakare, zvinokwanisika kushandura mota yepeturu kuti iite iwirirane negirifiyoli peturu yegesi.
Kumwe kwekusahadzika kazhinji ndiko kunodiwa kuti ukwanise kushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG. Pakati pezvakanaka zvequefied petroleum gasi isu tinowana yakaderedzwa mashandisirwo uye mutengo wakaderera.
Zvimiro zvekushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG
Idzi mota ndidzo mota dzine injini yekupisa uye kunyanya peturu injini. Zvinogona kutaurwa kuti imotokari dzebifuel idzo dzine injini imwechete asi iine mafuta maviri anogona. Izvi zvinoreva kuti ivowo vane matangi emafuta akasiyana. Inogona kushanda zvakakwana nepeturu kana ine liquefied petroleum gasi zvisina kujeka. Naizvozvo, padanho rehunyanzvi, iyo inotanga pahwaro hweyakajairwa peturu mota.
Iyo yakasanganiswa petroleum gasi tangi ine hunyanzvi hwekuita hwakasiyana neyakajairika iwo. Aya mamiriro ehunyanzvi ndiwo anotsanangudza kana mota ine peturu injini yemafuta inogona kushandurwa kuita LPG kana kwete. Chimwe chinhu chekufunga nezvacho mirau. Uye ndezvekuti zvakateedzana zvezvinodiwa uye ma parameter anofanirwa kusangana kuitira kuti ishandure kuita peturu peturu. Pane zvimwe zvakasarudzika zvinofanirwa kuve zvakadzama kuitira kuti uzive zvakanaka kana uchikwanisa kushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG.
Kana tikaongorora padanho rehunyanzvi, tinogona kuona kuti mota dzese dzepeturu dzakanyoreswa kubva muna 1995 zvichienda mberi dzinogona kushandurwa kuita gasi remafuta epeturu. Chete mune chaiwo mamodheru akanyoreswa kubva musi uno kusvika 2001, ayo anoenderana neEuro 3 kana gare gare mirau ndiyo inogona kushandurwa. Zvichienderana neichi chirevo, chinofanirwa kutariswa kuti mota yakanangana jekiseni kana isina kunanga jekiseni. Mota dze peturu dzine zvisina kunangana jekiseni system inogona kushandurwa kuita liquefied petroleum gasi zviri nyore. Shanduko dzinogona kuitwa mune chero nyanzvi yemusangano. Chii chinopa hunyanzvi hunyanzvi uye dzinogona kusakwanisa kuchinjira kuchirango chemafuta ndeye peturu mamodheru ane yakananga jekiseni system.
Chikonzero nei iwe usingakwanise imhaka yekuti mota yakashandurwa kuita liquefied petroleum gasi kuti ishandiswe yechipiri seti chaiyo majekiseni eLPG. Panyaya yemamodheru ane jekiseni rakananga, zvinoreva kuti majekiseni epeturu haagamuchire mafuta kana mota iri kumhanyisa gasi remafuta epeturu. Kana izvi zvikaitika, zvinogona kukonzeresa mukuwandisa kweinjini uye nezvinetso zvakasiyana. Mota dzine fekitori LPG dzine yakananga jekiseni injini uye dzakashandura majekiseni akagadzirirwa kumira kumusoro kwakanyanya tembiricha.
Padanho rehunyanzvi, zvinokwanisika kushandura mota yepeturu kuLPG ine jekiseni rakananga asi shanduko inoreva kuti majekiseni anofanirwa kuitisa kupisa zvirinani pamwe neTeflon insulators inofanirwa kuiswa kuti ikwanise kurwisa kupisa. Zviripachena, zvese izvi zvinotakura yakakwira yekutanga mutengo.
Mutengo wekushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG
Sezvatinoziva, kushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG kune zvakawanda zvakanakira, kunyange iinewo zvimwe zvinokanganisa. Liquefied petroleum gasi iri kugadzira butane uye propane base. Ichokwadi kuti iri kuwedzera uye vagadziri vazhinji vanowedzera mumamodeli avo. Uye ndeyekuti ine hukuru hwakakura hwehupfumi uye hwezvakatipoteredza izvo zvinopa imwe nzira inonakidza peturu.
Mutengo wemotokari wakafanana neiyo peturu kana dhiziri zvikamu, asi nekufamba kwenguva iwo anodhura zvakanyanya. Uye ndezvekuti kurangwa kwemafuta kwakachipa kwazvo mafuta pane echinyakare. Inotarisirwa kuti yakawanda kana shoma iyo yekuwedzera mutengo wemotokari inozvibhadharira iyo yega yega mushandisi painoita anenge makiromita zviuru makumi matatu pagore. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mota idzi dzine matangi maviri saka kuzvitonga kwavo kwakakwirira. Ndokunge, vane tangi remafuta echinyakare uye peturu akajairwa. Nekuda kweizvi, vanogona kufamba anopfuura makiromita chiuru vasina kumira kuti vawedzere mafuta.
Kana iwe usina mari yakakwana yekutenga mota ine LPG yakaiswa, unogona kushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG. Paunenge uchinge waongorora kana kushanduka uku kuri kubatsira iwe, unofanirwa kuenda kumusangano wakakosha kuti umise kititi chakabvumidzwa. Iko kukosha kwakakosha, saka zvinokurudzirwa mavhiki akati wandei mushure mekusefa kushanyira ITV kuti uone kuti kumisikidzwa kuri pachokwadi uye shanduko inogona kubvumidzwa. Iyo LPG tangi yakaiswa mune yakasarudzika vhiri zvakanaka.
Kana ari iwo mutengo, kufambidzana kunosiyana zvichienderana nekufambisa kwemota imwe neimwe, asi kazhinji inotenderera pakati pe1.500 2.000-XNUMX euros. Kuisirwa kunotora mazuva mashoma uye zvinoenderana nerudzi rwemotokari.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekushandura mota kubva peturu kuenda kuLPG.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Biofuels » Autogas » Chinja mota kubva peturu kuenda kuLPG